Myanmar CNN - Home | Facebook
See more of Myanmar CNN on Facebook
26,262 people like this
26,104 people follow this
Contact Myanmar CNN on Messenger
စိုက်ပျိုးရေး ဗဟုသုတ စုဆောင်းထားရာနေရာ
ဇွန် ၂၀ ရက် နံနက် ၂ နာရီ ၃၅ မိနစ်ခန့်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တံခါး မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် မန္တလေး ပုံမှန်လမ်း၊ မိုင်တိုင် ၁၁၉/၁ နှင့် ၂ ကြား ကျောက်တံခါး မြို့နယ်၊ ကျွန်းကုန်းကျေးရွာအနီး ရန်ကုန်ဘက်မှ မန္တလေးဘက်သို့ သံချောင်းများ တင်ဆောင်လျက် ယာဉ်မောင်း(စုံစမ်းဆဲ)မောင်းနှင်လာသည့် ၂၂ ဘီး အနက်ရောင် ယာဉ်မှာ လမ်းဘေးတွင် ရပ်ထားခဲ့စဉ် ရန်ကုန်ဘက်မှ မန္တလေးဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း (စုံစမ်းဆဲ)ေ...မာင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်အမှတ် (စုံစမ်းဆဲ) စားအုန်းဆီပီပါများ တင်ဆောင်လာသည့် ၂၂ ဘီး အဖြူရောင် ယာဉ်မှာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဘေးမှဝင်ရောက် ချိတ်မိခဲ့၍ ယာဉ်နှစ်စီးလုံး မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယာဉ်မောင်းနှစ်ဦးမှာ အခင်းဖြစ်နေရာမှ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ ပြီးခေတ္တမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မနရမှူး (ကျောက်တံခါး) ရဲမှူး၊ကျောက် တံခါးမြို့မရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး၊
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_8446.html
အခြား သတင်းထူးများအား https://www.facebook.com/ygnnews ကို နှိပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ သတင်းအသစ်တင်တိုင်း Facebook မှ ဖတ်လိုပါက ၎င်း Page ကို Like လုပ်ထားပေးပါ။
ဆေးစစ်ခနဲ့ အခမဲ့ ဆေးကုသခွင့် အလုပ်လုပ်ခွင့် အပါအဝင် အသက်သာဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် အစီအစဉ်အရ တစ်ယောက်ကို ဘတ်ငွေ ၂၅ဝဝ နီးပါး အလုပ်သမားတွေ
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_2419.html
ဓားဖြင့် ထိုးခံရသူမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မှာ အမှတ်(၂၈)မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ကိုယ်ပိုင်အမှတ် လ/၁၉၄၉၁၃ ရဲတပ်သား ထွန်းတင် ဆိုသူဖြစ်ပြီး လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း လုံခြုံရေးကင်းအမှတ် 8MCC နေရာရှိ ဘား တိုက်ရှေ့တွင်ထိုင်နေစဉ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_1490.html
ယင်းဖျော်ဖြေပွဲကို ဘိုဘိုအင်တာတိန်းမင့်မှ ပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ အနုပညာရှင်အချို့ပါဝင်မည်ဖြစ်ကာ အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုမူ
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/2ne1.html
မြန်မာဓလေ့ အခေါ်အဝေါ် တွေထဲမှာ အထက်အရပ်ကို အညာ။ အောက်အရပ်ကိုအကြေ။ မန္တလေးမြို့ အနီးအနားမှာနေသူ တွေကို အညာသူအညာသားပေါ့။ မန္တလေးအောက် ရန်ကုန်ဒေသ သားတွေက ...အောက်သားပေါ့။ အဲဒီလိုဒေသကိုခွဲပြီးခေါ်ကြတယ်။‘ဒဂျဲ’ဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးကိုတော့ စာဖတ်သူများ ကြားဖူးမယ်မထင် ပါ။ မျက်စိထဲမြင်သာအောင်ပြောရရင်တော့ မန္တလေးအထက် ပုဂံညောင်ဦးနယ်ကပါ။ ဘုရားမီး ပူဇော်တော့ ဖယောင်းတိုင်။ ညအခါ မိသားစုထမင်းလက်ဆုံစားတော့ အလင်းရောင်မှိန် ဖျော့ဖျော့ရေနံဆီမီးခွက်။ ကားလမ်း မပေါက်၊ တယ်လီဖုန်းတိုင်မရှိ၊ လျှပ်စစ်မီးမသိတဲ့အရပ်။ လျှပ်စစ်နဲ့သုံးရတဲ့ ပစ္စည်းဘာဆိုဘာမှမရှိ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီရွာကအညာသူ လေးတစ်ယောက်ကတော့
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_7420.html
သူဌေးကုန်းရေကျော်ရွာကလေးသည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ၀ါးခယ်မမြို့နယ်အပိုင် ဧရာဝတီ မြစ်လက်တက်မြစ်ကြီးတစင်း၏ မြစ်ကမ်းနဘေးတွင်တည်ရှိသောရွာတရွာဖြစ်ပြီး မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များနေထိုင်ရာဖြစ်ပါ၏။ သည်နေရာတွင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သားတို့ တဦးနှင့်တဦး
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_6916.html
"ယာယီချပေးတဲ့ ဒီပုံစံ ၃ အပေါ်မှာတော့ လုံးဝလုပ်ပိုင်ခွင့်အဆင့် နောက်ဆုံးအဆင့်အထိ ပေးသင့်တယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်၊ ယာယီလောက်ပဲပေးတယ်ဆိုတော့
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_4552.html
‘‘သဲချောင်းကနေ အမှောင် ထုကိုအသုံးချပြီး ဖြတ်ဝင်လာ တာ။ အဲဒီအချိန်က မိုးကမှောင် နေတာ
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_7077.html
ဒီကနေ့ ရန်ကုန် တာမွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တရနဲ့ သံဃာ ၄ ပါးအမှုကို
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_7712.html
ဒီနေရာမှာ အင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေ သတင်းအပြိုင်အဆိုင်တင်တာချင်းအတူတူတောင် ဝေဖ...န်ထောက်ပြတာထက် ရှုတ်ချတဲ့ သတင်းတွေကပိုများသလို ဖေ့ဘုတ်တခွင် နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီဖြစ်ရပ်တစ်ခုတည်းကိုသာ ဇောင်းပေးပြီးအသားပေးဖော်ပြတယ်။ ဘီဘီစီ က Pat Navan နဲ့အဲဗာတွန်နည်းပြ Martinez တို့ က ဆွာရက်စ် ဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီလိုနေတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြတာကလွဲလို့ကျန်တဲ့သူအတော်များများ အခွင့်အရေးရတုန်းဆွမ်းကြီးလောင်းဆိုသလို ၂ နှစ်ပယ် တွေဘာတွေဆိုကြတယ်။
ဆွာရက်စ် ကိုက်တယ်။ ဘာလို့ ကိုက်လဲ ? Psychologist တွေအတော်များများက
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/psychologist.html
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းမြင့်က နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ သစ်ခိုးထုတ်နေတာတွေကို ဟန့်တားကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေ ချမှတ်ထားနိုင်တာ ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းရာ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးအေးမြင့်မောင်က အခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပ...ါတယ်။
"တရားမဝင် သစ်ခိုးထုတ်မှုပေါ်မှာ သစ်တောဦးစီးဌာနက တည်ဆဲဥပဒေများနဲ့အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သလို တပ်မတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေ
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_533.html
ဇွန်လ ၂၇ ရက် ကနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ အမရပူရအမတ် ဦးသိန်းထွန်းဦးက အနှိပ်ခန်းတွေ ကေတီဗွီတွေကို
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_5153.html
မုံရွာ - တင်တိန်ရံ လူစီးအဆန်ရထား စက်ခေါင်းအမှတ် (DMG – 206) ရထားအား စက်ခေါင်းမောင်း ဦးသန်းကြွယ်မှ မောင်နှင်လာစဉ် LUOJIAI 125 အမျိုးအစား၊ ယာဉ်အမှတ် ၂၉ယ/ ၁၇…. ဆိုင်ကယ်သည် ဗညားဒလလမ်းအတိုင်း
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_6319.html
“ကျနော်တို့က တာ့ဖါဆောင်တံတားစခန်းမှာ စစ်ကူသွားပေးမလို့လေ။ အဲဒီစစ်ကြောင်းက ကျနော်တို့ ဦးတည်သွားနေတဲ့ဘက်ကို လှည့်လာတော့ တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတာ။ ကျနော်တို့ဘက်က တယောက်ဒဏ်ရာ ရတယ်။ သူတို့ဘက် လက်နက်ကြီးတွေ
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_6731.html
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ် ထွက်လာ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းအကြောင်း ဖော်ပြမှု အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ပါဝင်နေ
၂၀၀၃ မေ ၂၅ရက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ယာဉ်တန်းနှင့် ယာဉ်တန်းကို လိုက်လံနှောင့်ယှက်နေသူများ(ဓာတ်ပုံ− burmalibrary.org)
လွန်ခဲ့သော ခုနစ်နှစ်ခန့် က ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့် နိုင်ငံ တော်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ် ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းအကြောင်း ရေး သားထားသည့် ‘မမျှော်လင့်သော ခရီးရှည်’ဟု အမည်ပေးထားသည့် စာအုပ် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထွက်ရှိလာသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းနေရာ တွင် စာရေးဆရာ မြင့်သူက (First Person) ပုံစံဖြင့် ၀င်ရောက်ရေး သားထားခြင်းဖြစ်ပြီး အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်အတွက် ကာယကံရှင်နှင့် နီးစပ်ခဲ့သည့် လူ ၁၀၀ ခန့်ကို တွေ့ ဆုံမေးမြန်းပြီးမှ ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စာရေးဆရာ မြင့်သူ က စာအုပ်မိတ်ဆက်တွင် ရေး သားထားသည်။
သာမန်တပ်မတော် အရာရှိ ငယ်ဘ၀မှ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာ သူတစ်ဦး၏ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုကို အသေးစိတ် ရေးသားထားပြီး လူသိနည်းသည့် ကိစ္စအချို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်မှုများဖြင့် ရေးသားထားသည်။
ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်း တပ်မတော်သားတစ်ဦး၏ ဖြတ် သန်းမှု၊ ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်း အပါအ၀င် သူကြုံတွေ့ ဖြေရှင်းခဲ့ ရသော အရေးအခင်းများ၊ နာ မည်ကျော် ဒီပဲယင်းအရေးအခင်း
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_4313.html
အချိန်ကာလကား လမိုက်ည သန်းခေါင်ယံ ။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး အမှောင်ထုက တိတ်ဆိတ်စွာ ကြီးစိုးနေ၏ ။ နွေဦးပေါက်မို့ တစ်ချက်တစ်ချက် တိုက်ခတ်သော လေတိုးသံမှအပ မည်သည့်အသံမျှ မကြားရပေ ။ သက် ကယ်သောင် ရွာကလေးကား အမှောင်ထုအောက်ဝယ် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ တည်ရှိနေလေ၏ ။ ရွာတောင် ဖက်တွင်ရှိသော သင်္ချိုင်းကုန်းမှ ဆွဲဆွဲငင်ငင် အူလိုက်သော ခွေးအူသံကြောင့် ခြောက်ခြားဖွယ် အလွန် ကောင်း လှပေ၏ ။ ထိုအခိုက် မပီဝိုးတ၀ါး လမိုက်ညတွင် မဲမဲသဏ္ဍာန်နှစ်ခုက ရွာတောင်ဖက် သင်္ချိုင်...းအလည်မှ တရွေ့ ရွေ့သွားနေ၏ ။ သက်ကယ်သောင်ရွာနှင့် ရွာသင်္ချိုင်းကြားတွင် လွန်စွာရှည်လျှားသော ၀ါးရုံတော ကြီးတစ်ခု ရှိလေ၏ ။ ထိုဝါးရုံတောနှင့် ရွာကလေးကလည်း အတော်အလှမ်းဝေး၏ ။ မဲမဲသဏ္ဍာန်နှစ်ခုကား သင်္ချိုင်းကို လွန်မြောက်ပြီးနောက် ၀ါးရုံတောကြီးအောက်သို့ ရောက်ရှိလာ၏ ။ ကွမ်းတစ်ယာညက်ခန့် ကြာသော အခါ ၀ါးရုံတောကြီးသည် တဝေါဝေါမြည်ကာ သွက်သွက်ခါအောင် လှုပ်ယမ်းလာချေ၏ ။ ထိုသို့ ဖြစ်ပြီး မကြာမီမှာ ပင် မဲမဲသဏ္ဍာန်နှစ်ခုသည် သက်ကယ်သောင်ရွာဆီသို့ ပြေးထွက်သွားလေ၏ ။
လူအုပ်ကြီးက ၀ါးရုံပင်ကို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ စောင့်ကြည့်နေလေ၏ ။ တစ်နာရီခန့်ကြာသော်
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.ygnnews.com/2014/06/blog-post_1833.html